Vansangva Library – Vansangva စာကြည့်တိုက် | Just Another WordPress Blog
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6432845&secret_url=false VanSangVa Library1 by vansangva
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6086154%3Fsecret_token%3Ds-3e74i&secret_url=false VanSangVa Library3 by vansangva
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6283387%3Fsecret_token%3Ds-lyp7L&secret_url=false Vansangva Library4 by vansangva
– ပြည်နယ် များသည် မိမိတို့ ၏ ပြည်နယ် အသီးသီး အတွက် မိမိတို့ပြည်နယ်များ၏ သီးခြားလက္ခဏာ နှင့် ထူးခြားချက်များကို အခြေခံပြီး ပြည်ထောင်စု အခြေခံဥပဒေ နှင့် လိုက်လျောညီထွေသည့် ပြည်နယ် အခြေခံဥပဒေ အသီးသီးတို့ကို ရေးဆွဲပြဌာန်းရမည်။ (ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာ)
– ပြည်နယ် များသည် မိမိတို့ ၏ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးတို့ ကို မိမိတို့ ပြည်သူ များမှ ရွေးကောက် တင်မြှောက် ထားသည့် ပြည်နယ် ဥပဒေ ပြုလွှတ်တော်မှ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ရမည်။
– ပြည်နယ် ဥပဒေ ပြုလွှတ်တော်သည် မိမိတို့ ပြည်နယ် ၏ အခြေခံဥပဒေ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ကျမ္မာရေး နှင့် ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ် ရေး အစရှိသည်တို့နှင့် စပ်လျင့်း၍ ဥပဒေပြု ပြဌာန်း ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6181164%3Fsecret_token%3Ds-tbIj3&secret_url=false Vansangva Library5 by vansangva
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6181212%3Fsecret_token%3Ds-ae8nZ&secret_url=false Vansangva Library6 by vansangva
– ပြည်နယ် များ ၏ ပြည်နယ် အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲပြဌာန်း ခွင့် ကိုပယ်ဖျက်ထားခဲ့သည်။
– ပြည်နယ် ဥပဒေ ပြုလွှတ်တော် ကို လည်း ပယ်ဖျက်ထားခဲ့ပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးခေါ် ပြည်နယ်ဥက္ကဌ ကို ၀န်ကြီးချုပ်မှ ခန့်အပ်ရန်ပြဌာန်းလိုက်ကြသည်။
– ပြည်နယ် ဥပဒေ ပြုလွှတ်တော် မရှိတော့သည့်အလျောက် ပြည်နယ်များတွင် မိမိတို့ ပြည်နယ် ၏ သီးခြားအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာ များ မရှိတော့ပေ။
– ငြိမ်းချမ်းသော၊ တန်းတူသော၊ လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်သစ်တရပ်ကို ပြည်ထောင်စုပုံစံ ဖြင့် ပုံဖေါ်တည်ဆောက်ရေး လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့ ၏ ပင်လုံ မျှော်မှန်းချက်တို့ ရေစုံမျော်ခဲ့ ရသည်။ ပြည်သူကိုကျော်ခိုင်း သည့် တမင်းတနိုင်ငံ တပြည်ထောင်စနစ် ကို ပြဌာန်းဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6601156&secret_url=false Vansangva Library7 by vansangva
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6602442&secret_url=false Vansangva Library7a by vansangva
ရ။ “ဒီမိုကရေစီပြောင်းပြန်”။ (၁၉၅၈)
ကချင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးဟောင်း ဦး ဇန်ထာရှင်
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6826984&secret_url=false VSV Library8 by vansangva
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6827801&secret_url=false VSV Library8a by vansangva
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F8356910 VansangvaLibrary9 by zogamnuam
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F12223743 VSVLibrary by vansangva
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F13318168 VSVLibrary11 by VanSangVa
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F15964396 VansangvaLibrary12 by Vansangva
Thang Nang Lian Thang
ကချင်ဝန်ကြီးရဲ ဒီမိုကရေစီပြောင်းပြန်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀) နှစ်လောက်က
ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကောင်းကောင်း မမှတ်မိတော့ပါ။ အစိုးရ ယဉ်ကျေးမှု စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ ဖတ်ရတာပါ။ အခု ဒီမှာ နာမည်တွေ့ပြီးတော့ စာအုပ်မတွေ့ရပါ။ စာအုပ်ရှိရင် လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို မှတ်တမ်း တင်ထားသည့်အတွက် စီစဉ်သူကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
It’s really good! Keep going! Never give up!
I would like to suggest that Vansangva should produce materials like books altogether with interactive CD. And mass distribution should be done throughout the country.
Thanks for all the comments. With your supports we are gaining more strength to move on forward.
As for U Zan Hta Sin’s Book “Reversed Democracy” requested by T.T.A. we are about to upload it soon on this web site withashort commentary.
We are also grateful to Twan Zaw for the valuable suggestion. As Vansangva is basically driven by volunteerism, we are still short of human and financial resources. However, we will try all our best to startamass distribution as soon as possible.
VSV ရဲ့ တင်ပြမှုတွေနဲ့ဦးတည်ချက်တွေ ဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အရေး၊ တန်းတူရေး၊ လွတ်လပ်ရေး ရုန်း ကန်မှု တွေ တင်မ ကပဲ ဗမာပြည်သူတွေ ရဲ့စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဆန့် ကျင်ရေး တိုက်ပွဲတွေ နဲ့ပါ ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်း ဆက် နွှယ် ပေါင်းစပ် နေတယ် ဆိုတာ ကို သမိုင်း လက်တွေ့ တိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ်တွေ နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခိုင်ခိုင်မာမာ မီးမောင်းထိုး ဖေါ်ပြ နိုင်တဲ့ အတွက် ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ကြီး အတွက် အမြင်သစ် အတွေးသစ်တွေ နဲ့ အားဖြည့် ပေးနေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကို အထူးလေးစားပါတယ်။
Good sharing. All the politicians should study thoroughly. When we are going to prepare for 2nd Panglong, we have to learnalot of lessons from the past agreement and take care for the health and strength of the future Union.
We greatly appreciate every news article in regard to the VanSangVa Online Library. We are big fans of the website. Recently you uploaded the 1947 constitution drafted by Bogyoke Aung San. It was excellent because it highlighted the lack ofaproper constitution in Burma’s current government. It madeastrong point to all of us about how important it is to haveajust constitution as the basis for true democracy in Burma. Please keep up your good work.
Subject: ဦးထွန်းမြင့် (တောင်ကြီး) ၏ “ပြည်ထောင်စု အတွင်းမှ တန်းတူသော ရှမ်းပြည်”။ (၁၉၅၇)
Send me political Ebooks (in Burmese version)
Dear JAMES and PHT,
Please CLICK on အပြည့် အစုံ ဖတ်ရန် under the commentaries of BOOKS or documnets of each posting. These are all PDF or e-book forms of the documents for you to easily read or download.
အဆင်ပြေတဲ့အခါ “ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းပြန်” စာအုပ်ကို ဖြစ်နိုင်ရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
Arakan Yong Man
T.T.A. ခင်ဗျား အခုလဲ တင်ထားပါတယ်။ ဆွေးနွေး ခန်း ရဲ့ အောက်ဆုံးတိုင်း မှာ
“အပြည့် အစုံ ဖတ်ရန်” ဆိုတာကို နှိပ်ရင် စာအုပ်တွေ ကို ဖတ်နိုင် ဆွဲချနိုင်ပါတယ်။
မကြာ ခင်ဒီထက် ပိုမိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်သာအောင် ပြောင်းရေးပေးပါမယ်။ စိတ်ဝင် စား တာ၊ အားပေး တာ ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတွေ ဆီ ကိုလည်း ဆက်လက် ဖြန့်ဖြူးပေးပါလို့မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
you record the great political history for new generation thanks
Thanksalot. Thanksalot for expressing the truth. We love General Aung San and his mission. Whatever, it may come true. We’re with the different ethnic group.
Wayan T.M Win
ကျနော်တို့ ဗမာပြည်သားတွေအတွက် ဒီလို ၀က်ဆိုက်တွေ ဆောင်ရွက်မှုတွေ အများကြီး လိုပါတယ်။ ခု လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ သူတွေကို အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့် ။ ဗလ
လူငယ်၊လူလတ် များအတွက်နိုင်ငံရေး သမိုင်းအမှန်ကိုဖတ့်ရှုလေ့လာ နိုင်ရန်
VSV Library စီစဉ်ပေးကြသောVSV Groups အဖွဲ့သားများကို
ကျုပ်တို့ဟာ ဒီတိုင်းပြည်မှာ အစိုးရဖြစ်အောင် အတင်းအဓမ္မ လုပ်ယူတာမဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ ကျုပ်တို့ အစိုးရဖြစ်နေတာ။ တိုင်းပြည်က မကြည်ညိုဘူးဆိုတာ ကျုပ်တို့ သိတဲ့တနေ့မှာ ကျုပ်တို့လည်း မနေဘူး။ တွယ်မနေပါဘူး။ ထွက်မှာပါပဲ။ ကျုပ်တို့ဟာ ရာဇ၀င်မှာ အရေးခံရမယ့် လူစားမျိုးတွေလား၊ အဆဲခံရမယ့် လူစားမျိုးတွေလားဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် သိပါလိမ့်မယ်။ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းသူပြည်သား လူထုညီညွတ်ရေး၊ အဲဒီညီညွတ်ရေး နှစ်ခုမျရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး ဘယ်အစိုးရတက်တက်၊ ဘယ်အစိုးရကလုပ်လုပ် ဟိုလူ့မျက်နှာချိုသွေးရ၊ ဒီလူ့မျက်နှာချိုသွေးရနဲ့ ဖာသယ်လို နိုင်ငံမျိုးဖြစ်နေမှာပဲဆိုတာ ကျုပ်ပြောချင်တယ်။
(၁၉၄၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
“ဖက်ဆစ်ဝါဒ ကမ္ဘာမှာ ပပျောက်ရေးကို ကျနော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ ထည့်ထားတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အဲဒီဝါဒမျိုး ကို တိုက်ဖျက်မယ့်လူတွေနဲ့ အမြဲပူးပေါင်းပြီး အခွင့်အာဏာရတိုင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲ။ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ဒီဝါဒမျိုး လုံးဝမရှိနိုင်အောင် လုပ်ရမယ်။အာဏာရှင်ဝါဒ၊ လူမျိုးအချင်းချင်း မုန်းတီးရေးဝါဒ၊ ဂျပန်ပြည်မှာလို စစ်ကသာ လွှမ်းမိုးရမယ်ဆိုတဲ့ စစ်ဖက်အာဏာရှင်စနစ်၊ သက်ဦးဆံပိုင် ရှင်ဘုရင်စနစ်ဝါဒ၊ အဲဒီဝါဒမျိုး အငယ်စားဖြစ်တဲ့ ပဒေသရာဇ် မြို့စားရွာစားဝါဒ(Feudalism) အထက်ကသာ ခန့်ထားပြီး တိုင်းသူပြည်သား ဆန္ဒအရ မဟုတ်ဘဲ တိုင်းသူပြည်သားတွေနှင့် ကင်းကွာပြီး မင်းစိတ်ပေါက်တဲ့ အရာရှိတွေ ခြယ်လှယ်တဲ့ စနစ်ဆိုးတမျိုးရှိနေရင် အများပြည်သူတို့ ဆန္ဒနှင့် လုပ်ကိုင်ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီဝါဒ ခေတ်မစားနိုင်တဲ့ ဖက်ဆစ်ဝါဒ ဆင်တူရိုးမှားတွေ ပေါ်လာနိုင်တယ်။ ဒီဝါဒမျိုးတွေ ပေါ်လာရင်
တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ လွပ်လပ်ရေး ဆိုတာကို မရနိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီဝါဒကိုသာ ခေတ်စားအောင် လုပ်ရမယ်။ အဲဒီဝါဒမျိုးအရသာ လွပ်လပ်တဲ့ ဗမာနိုင်ငံ ထူထောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ဒါမျိုးမလုပ်နိုင်ရင် ဗမာပြည်က လူတွေဟာလည်း နစ်နာမယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်ကိုလည်း ကမ္ဘာက ကြည့်နေလို့ မရတဲ့တနေ့ ဂျပန်နဲ့ ဂျာမနီဝိုင်းပြီး
အနှိမ်ခံရသလို အနှိမ်ခံရမယ်ဆိုတာ သတိချပ်ကြရမယ်။ ဒီမိုကရေစီဝါဒသာ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဆီလျော်တယ်။ ဒီဝါဒသာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အားပေးတယ်။အဲဒါကြောင့် ဒီဝါဒကိုသာ ကျနော်တို့ ရည်ရွယ်ရမယ်။ ဒါဖြင့် ဒီဝါဒဟာ ဘာလဲဆိုတာကိုလည်း ရှင်းပြချင်သေးတယ်။ ကျနော်တို့ အမြင်အရဆိုရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဟာ လူတဦးထဲက ခေါင်းဆောင်မှုမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲ့နဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုမျိုး ဖြစ်ရမယ်။ အဖွဲ့ရဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘဲ ငါ့ဆန္ဒ ငါ့သဘောလုပ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ အဖွဲ့ရဲ့ဆန္ဒယူပြီး အဖွဲ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုမျိုး ဖြစ်ရမယ်။
လူမျိုးရေး တရားဟာလည်း ငါ့လူမျိုးမှ ငါ့လူမျိုး၊ တခြားလူမျိုးတွေဟာ ငါ့လောက်မမြတ်၊ ငါ့လူမျိုးသာ ကမ္ဘာကို ကြီးစိုးရမယ်ဆိုတဲ့
ကျဉ်းမြောင်းသေးသိမ်တဲ့ လူမျိုးရေးတရား မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ်ချစ်ခင်သော်လည်း တခြားလူမျိုးများကို မုန်းတီးခြင်း၊ အထင်သေးခြင်း မဖြစ်ဘဲ ကမ္ဘာမှာ တိုင်းပြည်အချင်းချင်း သင့်မြတ်စွာ တဦးအကျိုးတဦး
ဖြစ်ပွားစေအောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ လူမျိုးရေး တရားမျိုးလည်း ဖြစ်ရမယ်။ ဂျပန်ပြည်မှာလို စစ်ဘက်က လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး တိုင်းပြည်လွှတ်တော်က ဘာမှအစိုးမရတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဝါဒမျိုး မရှိရအောင် စစ်ဖက်ကို တိုင်းပြည်လွှတ်တော်က အုပ်စိုးနိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။ နောက် လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြခွင့် စည်းရုံးခွင့် အစည်းဝေးခေါ်ခွင့်နဲ့ စီတန်းလမ်းလျှောက်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ တွေးတောခွင့်၊ ကိုးကွယ်လိုရာ ဘာသာ ကိုးကွယ်ခွင့်၊ တရားနဲ့ မညီသော အဖမ်းအဆီး အချုပ်အနှောင်မှ ကင်းလွတ်ခွင့၊်ကိုယ်ရေး လွတ်လပ်ခွင့်၊ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ရာနှင့် နေထိုင်ခြင်းကို မတရားသဖြင့် နှောင့်ယှက်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ လူတိုင်း ပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့်၊ အခမဲ့ ဆေးဝါး အကူအညီ ရရှိခွင့်၊ မတရားသဖြင့် စီးပွား ချုပ်ချယ်မှုများမှ လွတ်ကင်းချမ်းသာခွင့်၊ အလုပ်သမား လယ်သမားများရဲ့ အနည်းဆုံး အခွင့်အရေးများကို အစိုးရမှ စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားမျာ၏ အနည်းဆုံး အခွင့်အရေးများကို အစိုးရမှ စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ တိုင်းပြည်တွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်ဓလေ့၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်၊ အိုစာ နာစာ၊ အထိအခိုက် လျော်ကြေး ရန်ပုံငွေ အစရှိသည်တို့ကို အစိုးရက ထားပြီး အိုမင်း၍လည်းကောင်း၊ နာဖျား၍လည်းကောင်း၊ ထိခိုက်နာကျင်၍ လည်းကောင်း၊ အလုပ်လုပ်ချင်သော်လည်း အလုပ်မရနိုင်၍ သော်လည်းကောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း မပြုစွမ်းနိုင်သူများသည် အစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ကို ရရှိခွင့်၊ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးမျိုးတွေလည်း ရှိရမယ်။ အထက်ပါ အချက်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီဝါဒရဲ့ အခြေခံတွေပဲလို့ ယူဆတယ်။ ဒီလို
အခြေခံတရားတွေကို ရည်ရွယ်ရင်းရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာလည်း ဒီတရားတွေနဲ့ ညီတဲ့ အများဆန္ဒအရ ရွေးကောက်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ခြင်း စတဲ့ နည်းစနစ်မျိုးသာ သုံးရပေလိမ့်မယ်။”
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းများကို မှတ်တမ်းတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ…ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကမဖတ်ရှုရတဲ့အမ္ဘာ့အလယ်မှာ တင့်တင်တယ်တယ် ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်များ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာ အဖြစ် ပြန်လည် ခေါင်းမော့နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအစွမ်းကုန် လက်တွဲကြိုးစားကြရမှာပါ…စိတ်ဝင်စားကြသူများအားလုံး တစ်ယောက်တစ်လက် ကိုယ်တတ်အားသမျှ ပူးပေါင်း လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုတာပြန်လည်ပေၞထွက်လာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်..အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရှာဖွေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ…
ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းပြန်စာအုပ်ကို ဓါတ်ပုံမိတ္တူဖြစ်ဖြစ် ရိုက်နှိပ်၍ဖြစ်စေ လိုချင်ပါတယ်။
စာအုပ် ထုတ်ထားချင်လို့ပါ။ အခု အသံဖိုင် (သို့) စာမြည်းရိုက်နှိပ်ထားသည်က ကောင်း
ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မူရင်းရိုက်နှိပ်ထားတဲ့အတိုင်း ဖတ်ချင်လို့ပါ။ ဒီစာအုပ်ဟာ အွင်လိုင်း
ထဲမှာ ဘယ်နေရာမှာမှ ရှာမရတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီပြောင်းပြန်စာအုပ်ကို ဒီဝက်စိုက်မှာ ပဲတင်ထားပါတယ်။ (အထက်မှာ ကြည့်ပါ)။
လူငယ်များဒီမိုကရေစီ၏အနှစ်သာရများသိစေရန်ရည်ရွယ်၍ ဒီ ဂျီမေးကိုတည်ဆောက်ထားပါသည်။ အခုလိုဝက်ဆိုဒ်ရှိမှန်းသိရ၍များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
Vasangva Group အမြင့်ပျံငှက်ဝိုင်းတော်သားများ ကိုအထူးလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသား(တရုတ်၊ကလား)မဟုတ်သောလူမျိုးစုတိုင်းဟာပြည်ထောင်စုစိတ်ဓတ်ရှိဖို့ ပြည်ထောင်စုအမြင်အသိရှိဖို့အရေးကြီးနေချိ်န်မှာ အမြင့်ပျံဝိုင်းတော်သားများရဲ့ ကျိုးစားမှုတင်ပြမှုများအတွက်အထူးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့ကလစာပေးပြီးခိုင်းထားခြင်းခံနေရတဲ့မြန်မာတပ်ဗိုလ်၊အကျပ်တပ်သားတွေပြည်သူဘက်ကရပ်တည်ဖို့၊ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓတ်ရှိဖို့ဘဲလိုအပ်ပါတယ်၊ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓတ်ရှိသောတပ်မတော်သားများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
This is very nice and complete political history of Myanmar. We need to know the real history based on historical book like these books. I had some experience about this political situations in Myanmar from Myanma Swal Sone Kyan old version from my father. What we learn in the school was totally different. Thanksalot for this web. I am also wanted the Pin Lone agreement. That will be the solution. Lets sit together and looking forward for the benefit of our people, our union. Wishing for the New Federal Union.
ဖော်ပြချက်မှာ ကျန်နေသေးတဲ့အချက်တွေ၇ှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ..အဲဒါကယခင်တုန်းကကျင့်သုံးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့စနစ်ဆိုးများကိုလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်..ဘာလိုလဲဆိုတော့အဲဒီစနစ်တွေ ဟာအခုဖြစ်ခဲ့သလိုပဲတွေ့ ကြုံ့ ခံစား၇မှာပါ…ဆိုလိုတာက သူတို့ လည်းဆိုးချင်၇င်ဆိုးပါမယ် ဒါပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ နိူင်ငံေ၇းစနစ်တွေကတော့ တိုင်း၇င်းသားပြည်သူတွေကိုေ၇ာ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကိုပါ ဒုက္ခဖြစ်စေတာပါပဲ။။တချိံန်ကလူကြိုက်များခဲ့တဲ့စနစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုချန်ပြီးဝေဖန်ရင် ပြည့်စုံမှာမဟုတ် သလို ထိမ်ချန်ထားသလိုဖြစ်နေမှာပါ..ပင်လုံပြသနာမှာအဲဒါနဲ့ လည်းပက်သက်နေမယ်ထင်ပါတယ်..ဒါပေမယ့်ဒီမိုကေ၇စီစနစ်သာ မှန်ကန်အောင်ဖော်ဆောင်နိူင်မယ်ဆို၇င် အကုန်တန်းတူဖြစ်သွားမှာပါပဲ …
ဒီမိုကရေစီပြောင်းပြန် (မူရင်း )စာအုပ် ။ နောက်ဆက်တွဲမှာ ဦးဗဆွေရဲ့ အတိုက်အခံ မိန့်ခွန်း အပြေ့ အစုံပါတယ် ။ အခု ပို့စ်မှာ အတိုက်အခံမိန့်ခွန်းကို ထောက်ခံတဲ့ ဦးဇန်ထားဆင်ရဲ့ ထောက်ခံချက်ပဲတွေ့ရတယ် ။ ဦးဗဆွေရဲ့ အတိုက်အခံ မိန့်ခွန်း ဘကြောင့် ပျောက်နေရတာလဲ ။
အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပါ ( အင်္ဂလိပ် မူရင်း ) ဘယ်မှာရမလဲဗျ ။ ကျေးဇူးပြုပါဦး ။
Dear Aung, Please go to the top part of the Vansangva Library and click the Content No. 1 and you will see the Panglong Agreement with commentary. Thanks for your interest and commnets.
Dear U Aye Maung,
ကျနော်တို့ဆီမှာ ရှိတဲ့ မူရင်း ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းပြန်စာအုပ် (၁၉၉၀ တတိယအကြိမ်) မှာ ဦးဗဆွေရဲ့ အတိုက်အခံ မိန့်ခွန်း မပါရှိပါ။ ရှာဖွေတွေ့ ရှိပါက မျှဝေပေးပါမည်။ စာဖတ်သူများ က လည်း တွေ့ရှိပါက မျှဝေပေးကြပါ၇န် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
အောင်ဆန်း အက်တလီ စာခုပ် (အင်္ဂလိပ်မူရင်း ကို) အောက်ပါလင့် မှာ ဖတ် နိုင်ပါသည်။
စိတ်ဝင်တစား ပါဝင်ဆွေးနွေး ပြီး ဟာကွက် လိုအပ်ချက်များကို အခုလို ထောက်ပြသည့် အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ဝေဖန်စရာရှိလျင်အား မနားတန်းဝေဖန် ထောက်ပြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Have you ever considered about addingalittle bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However think of if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could certainly be one of the greatest in its niche. Excellent blog!
We need to distribute all Vansangva documentary inside Burma to motivate and inspire our people and to uplift the Aspirations of Panglong.
If possible these should also be broadcasted in Radio and distribute them in CD format.
Thank you so much Vansangva!
Aung San-Atlee Agreement အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
Subject: Audio Files တောင်းခံခြင်း
ကျနော်သည် မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း (HURFOM) မှ လူ့ခွင့်အရေးနှင့် ပညာပေးအစီစဉ်တွင် ပါဝင်အလုပ်လုပ်နေပါသည်။ ဒီမိုကရေစီအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်ပီး မွန်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုရန်အတွက် ဒီဆိုက်တွင် လွှင့်တင်ထားတဲ့ Audio Files များကို တစုတစည်းတည်း လိုချင်ပါသည်။ အစင်ပြေမယ်ဆိုရင် Hosting Site (media Fire) တခုခုကနေ Upload တင်ပေးပါရန် ရိုသေစွာ တောင်းခံအပ်ပါသည်။
နိုင်စဝေါအဲ ( လူ့ခွင့်အရေးနှင့် ပညာပေးအစီစဉ်)
ဒီလိုနေရာမျိုးရှာနေတာကြာပီ ခုမှတွေ့တယ် ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညံ့သေးတယ်လို သတ်မှတ်ပါတယ်..။
ဒီနေရာက အကြောင်းအရာတွေကို ကူးယူ၊ ဖြန့်ဝေခွင့်ပြုပါ..။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီပြန့်ပွားရေးနဲ့ စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော့ တည်ဆောက်ဖို့ပါ…။
ဦးနိုင်စဝေါအဲ အတွက် မကြာမီ အသံဖိုင်များပေးဖို့ပါမည်။ ပျော့ပျောင်းတဲ့ condition တွေကို လည်း eamail နဲ့ ရေးသားပေးပို့ပါမည်။ အခုလို စိတ်ဝင်စားတဲ့ အတွက်ရော ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် ခွင့် ရတဲ့ အတွက် ပါ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ဦးထက်အောင်ခင်ဗျား။ ကြိုက်သလိုသူးယူဖြန့်ဖြူး နိုင်ပါတယ်။ SOURCE ကိုတော့ http://www.vansangva.com အဖြစ်အမြဲ ဖေါ်ပြပေးရင်လုံလောက်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားမှု ကိုပြသတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူမျိုး၊ဒေသ၊ နယ်မြေ၊ ဘာသာ စတဲ့ အတားအစီး တံတိုင်းတွေ ကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြိုချဖို့ ဆိုရင် ကျနော်တို့ အများကြီး ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားကြရမှာပါပဲ။
ကျနော် ကျေးဇူး အထူး တင်ပါတယ်၊ ဂုဏ်လည်း အထူး ယူမိ ပါတယ်။
ဂုဏ်ယူ မှူပေါင်း များစွာဖြင့်
Dear, I would like to express my thanks to all of the members of
this group and specially the moderator.I think ,I will have got the
opportunity of discuss and seminar with respect to our burma political
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ပြောဆိုပါဝင်ပေးနေတဲ့ အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်တွေထဲကတခုပါပဲ။
အားလည်းရ ကျေလည်းကျေနပ် ပီတိလည်းဖြစ်ရတယ်ခင်ဗျား။ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ဆထက်ထမ်းပိုးကြိုးပမ်းအောင်မြင် သွားမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။
Myo Myint(Burma Soldier)
ကျေးဇူးပြု၍ “ဒီမိုကရေစီပြောင်းပြန်“ စာအုပ်ရေးသားသူ ဦးဇန်ထရှင် နာမည်အား
ရှင် မဟုတ်ပါ။။ ဆင် သာဖြစ်ပါသည်။။
အရမ်း ကောင်း ပါတယ်။ပေးပို့သူအား အထူး ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
မြတ်အနော်မာ ပြန်လှယ်ဖြန့်ဖြူးခွင့် တောင်း ခံခြင်း
မဆလ လက်အောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ သမိုင်းအစစ်အမှန်တွေကို တိတိကျကျသိရှိခွင့်မရခဲ့တာ အတိအကျပါ၊ ထိန်ချန်၊ ဖုံးကွယ်၊ လိမ်ညာထားတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတန်းတွေကိုသာ ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာ။ ကျွန်တော်ယုံကြည်တာက ဘယ်အစိုးရတက်တက်၊ ဘယ်သူတက်တက်၊ ဘယ်စံနစ်နဲ့ပဲ အုပ်ချုပ်စေကာမူ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကချင် ကယား ကရင် ချင်း မွန် မြန်မာ ရခိုင် ရှမ်း အပါအ၀င် အခြားသော လူမျိုးနွယ်စုပေါင်း များစွာတို့ဖြင့် နေထိုင်တဲ့ မာလ်တီ အက်သ်နစ် နိုင်ငံတခုပါ၊ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတခုအဖြစ် ၀ိုင်းဝန်းကျင့်သုံးထူထောင်တဲ့ နေရာမှာ သမိုင်းအမှန်ကို သိထားပြီး အတိတ်က အမှားတွေကို နောက်ထပ် ထပ်မမှားဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ မွေးရာပါ တာဝန်ပါ။ အခုလို အမှန်တရားတွေကို သိခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ။ ရှင်သန်တိုးတက်ပါစေ။
စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး အမြန်ဆုံးပေါ်ထွန်းရမည်။
ညီမမြတ်အနော်မာခင်ဗျား။ အခုလို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိတဲ့ အတွက် ကျနော်များ အမြင့်ပျံငှက် ၀ိုင်းတော်သားများအားလုံး ၀မ်းသာရပါတယ်။ ဆက်လက်ဖြန့်ဖြူး လိုတယ်ဆိုလို့လဲ အတိုင်းထက်အလွန် ကျေးဂျူးကမ္ဘာ ပါပဲဗျာ။ လူအင်အား မလုံလောက်တာ အချိန် စဉ်းရဲတာတွေကြောင့် ခြက်ခြင်း ပြန်လည်ဖြေကြား တုန့်ပြန်မှု မလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုတော့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့တောင်းပန်လိုပါတယ်။ http://www.vansangva.com ဆိုပြီး URL ကိုအမြဲဖေါ်ပြပေးရင်ပြီးတာပါပဲ။ အဖိနှိပ်ခံ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး ဒေသ၊ဘာသာ၊လူမျိုး ဆိုတဲ့ တံတိုင်းတွေ ကို ဖြိုချပြီး တူညီ၍ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံခေါ် အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်ကို တထပ်ထဲ ယုံကြည်လာကြပြီး အဖိနှိပ်ခံ တပ်မတော်သား များ အပါ အ၀င်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ စည်းလုံးမှု အားနဲ့ နာဂစ် အမှောင်တိုက် ကိုဖြိုခွင်း ပြီး ပင်လုံ ဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အလင်းကမ္ဘာဆီ ကို အတူတကွလျောက်လှမ်း နိုင်ကြပါစေ။
Htun Htun Oo ခင်ဗျား။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေဗျာ။ မဆလ ခေတ်ကစပြီး တိုင်းတပြည်လုံး ကို အမှောင်တိုက်သွင်းခဲ့တာပါ။ လူတွေကို အသိညဏ် လုံးဝကင်းမဲ့သွားအောင်၊ အမှန်ကိုအမှန် အတိုင်းသိရှိ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုမရှိအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့လို့လဲ မဆလခေတ် ကစဒီနေ့ အထိစစ်အာဏာ သက်စိုးရှည်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အမှန်တရား ဟာဖုံးကွယ် လို့ မရဆိုတဲ့ စကား ဟာ မှန်လွန်းနေတယ်။ ဒီနေ့ အမှန်တရားတွေ ကို ဖြန့်ဖြူးနိုင်တဲ့ တက်နိုလိုဂျီတွေ ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အသုံးချမယ်၊ ဒီနေ့ အမှန်တရား တွေ ကို ကျယ်ပြန့်သထက်ကျယ်ပြန့်အောင်ဖြန့်ဖြူးနိုင်မယ်ဆိုရင် မနက်ဖန်ကျနော်တို့ တတွေ လွတ်မြောက်ကြမှာပဲ။
မဆလ က အာဏာသုံးပြီး အမှန်တရားတွေ ကို ထိထိရောက်ရောက်ဖုံးဖိထားနိုင်ခဲ့သလို ကျနော် တို့ အားလုံး ကလည်း တက္ကနိလိုဂျီ နည်းပညာ သစ်တွေ ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သုံးပြီး စစ်ဘီလူးတွေ ကသွေးစုပ်ဖို့ ဖန်တီးထားခဲ့ တဲ့ အမှောင်တိုက် ကိုဖြုခွင်းနိုင်ရမှာပါ။ ကျနော်တို့တတွေအားလုံးလက်တွဲ အလုပ်လုပ်ကြရအောင်ပါ။ အလုပ်လုပ် ဖို့ ဆိုရာမှာ လည်း ခဲရာခဲ ဆစ်ကြီးတွေ မဆိုလိုပါဘူး၊ ONE CLICK နဲ့ သတင်းမှန်တွေ အမှန်တရား တွေ ကိုဆက်လက်ဖြန့်ဖြူဒဝေငှ လို့ရတဲ့ ခေတ်မို့ သတင်းတော်လှန်ရေးထဲမှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်တာပါ
အင်မတန် ကောင်းပါတယ်ဗျာ၊ အရမ်းကို အားကျ မိ ပါတယ်။ သည့်ထက် မက ကောင်းအောင် ဆက်လက် ကြိုးစား စေချင် ပါတယ်။ အမြဲ အားပေး နေပါ့မယ်။
အဆုံးစွန်သောတိုက်ပွဲ အတွက် အသင့်ပြင်ကြစို့! Let us all pepare for the final assault!
ဒုတိယ ပင်လုံ စခမ်း ဆီကို ငြိမ်းချမ်းရေးကို အငန်းမရ လိုလားကြတဲ့ အဖိနှိပ်ခံ ဗမာ့ တပ်မတော်သား များ အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့ရဲ့ အား နဲ့ ချီတက်ကြရ မှာမဟုတ် လား?
ဒါမှမဟုတ် အားလုံးသဘောတူထား ကြပြီးဖြစ်တဲ့ ပင်လုံ ငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ဖို့ ကို ရုပ်သေး အစိုးရ နဲ့စစ်အာဏာ ရှင်တွေ ကို ခခယယ ပန် ကြားနေကြ ဦးမှာလား?
ပြည်သူတွေရဲ့ အသံ ကိုနားစွန့် ကြပါ။ သိန်းစိန်ရုပ်သေး အစိုးရ မှာ ဘာအာဏာ မှမရှိ ဘူး။
ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်လေးလုံး အနှစ် (၂၀) ကျော်ကာ လ အတွင်း က လို ပန်ကြားမေတ္တာ ရပ် ခံ နေကြဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒုတိယ တတိယ ဒီပဲယင်း တွေနဲ့ ပိုပြီး မှောင်မိုက်တဲ့ နာဂစ်ညပေါင်းမြောက်မြားစွာ တို့ နဲ့ ကြုံ တွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ သုံး လေးခါ မကသေဘူးကြပြီ မို့ ပျဉ်ဘိုး ကိုနားလည်ကြရ အောင်ပါ။
ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၂၀) ကျော်ကာလ တလျောက် တွေးခဲ့တဲ့ အတိုင်း ဆက်တွေး၊ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၂၀) ကျော်ကာလ တလျောက် လုပ်ခဲ့တဲ့ အတိုင်း ဆက် လုပ်နေလို့ ကတော့ နောင်အနှစ် (၂၀) မှာ လည်း မြောက်လောင်းဘ၀ ကနေလွတ်ဖို့ လမ်းမမြင်ပါ။ IF WE DO THE SAME OLD THING, WE WILL GET THE SAME OLD RESULT. IT IS TIME FOR CHANGE!!! WE MUST CHANGE. WE MUST BA PART OF THE CHANGE. WE MUST BECOME THE CHANGE WE WANT. THEN ONLY CAN WE CHANGE OUR COUNTRY’S DESTINATION!!! ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကမှ မပြောင်းလဲပဲ တိုင်းပြည်တခုလုံးရဲ့ ကံကြမ္မာ ကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ။
ပင်လုံဆီကိုပြည်သူ့အားနဲ့ချီတက်ကြစို့။ (ပင်လုံ ကိုအရောက်သွားဖို့ဆိုတာ ဘိန်းစား ရုပ်သေး သိန်းစိန် ပါမှ မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်သူတွေ ညီရင်ညီတဲ့ နေ့ရောက်မှာဖြစ်တယ်။)
ပင်လုံ ဆိုတဲ့ အလင်း ခေတ် ဟာ၊ ပင်လုံ ဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ခေတ် ဟာ နာဂစ် အမှောင်တိုက်ထဲ ကို တတိုင်းတပြည်လုံးကို အတင်းအဓမ္မ ဆွဲခေါ် တွန်းပို့နေတဲ့ ကုလားကာနောက်ကွယ် မှာ ကြောက်လို့ပုန်းနေတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေ စစ်အုပ်စု နဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ ပျက်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်မီးတွေဆက်လက်တောက်လောင်နေမှ ထမင်းစား ကြရတဲ့ ရုပ်သေး သိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် လားလားမှ မသက်တိုင်တဲ့ အရာတွေပဲ။
ပင်လုံ နိုင်ငံတော်ကြီး ကို ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ သွေးစည်းညီညွတ်ရေး နဲ့ တည်ဆောက်ကြပါစို့။
နာဂစ်နဲ့ ပင်လုံ တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲ ဟာ အမှောင်နဲ့ အလင်းတို့ ရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။
နာဂစ်နဲ့ ပင်လုံ တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲ ဟာ အမှား နဲ့ အမှန်တရား တို့ ရဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။
နာဂစ် ဆိုတာဟာ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူတရပ်လုံး ကို ပြည်တွင်း စစ်မီး နဲ့ မြှိက် ပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေ နဲ့ ရုပ်သေး သိန်းစိန် အစိုးရ တသိုက် စည်းစိမ်ရစ်မူး ကြ ဖို့ ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်။
ပင်လုံ အားဖြင့် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူတရပ်လုံး ကို ပြည်တွင်း စစ်မီး ထဲ ကနေ ကယ်ထုတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ ဖက်ဒရယ်လ်ပြည်ထောင်စု ခေါ် ကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်တန့်မဲ့ ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်သစ် တရပ် ကို မျက်မောက်ပြုကြမှာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် နာဂစ် နဲ့ ပင်လုံ ဟာ လားလားမှ မဆိုင်ဘူး။ မဆိုင်သူတွေ ပင်လုံ ကို လာစရာ မလိုသလို လာခြင် တိုင်း လည်း လာလို့မရဘူး။ ငြိမ်းချမ်း တဲ့ ပင်လုံ မှာ နာဂစ် စစ်ဘီလူးတွေ မရှင်သန်နိုင်ဘူး။ အဆင့် မြင့် တဲ့ သိက္ခာရှိတဲ့ ပင်လုံ မှာ အောက်တန်း ကျတဲ့ နာဂစ်စစ်ဘီလူးတွေ အတွက် နေရာ တကွက်ကလေးမှမရှိဘူး။
နာဂစ် နိုင်ငံတော် ကနေ အားလုံး ပြတ်ပြတ်သားသား စည်းစည်းလုံးလုံးခွဲထက်ကြပါစို့။
Vansangva Group အမြင့်ပျံငှက်များ။
Re: [VanSangVa] အဆုံးစွန်သောတိုက်ပွဲ အတွက် အသင့်ပြင်ကြစို့!
Re: အဆုံးစွန်သောတိုက်ပွဲ အတွက် အသင့်ပြင်ကြစို့! Let us all pepare for the final assault!
A big big value article for this time to change and setup new strategy as ideology for our revolution.
အရမ်းကောင်းတဲ့ Web Site ပဲ၊ ပိုပြီးကြိုးစားစေချင်တယ်……..
သမီး က လူငယ်တွေဆိုတော့ ဘာမှမသိဘူး စာအုပ်ဖတ်ရုံလောက်ပဲ သိရတယ်
အမြင့်ပြန်ငှက်များစာအုပ်ကို ဖတ်ရပါတယ် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် ဆက်ပြီးကြိုးစားပါလို့
ဒီမိုကရေစီပြောင်းပြန် စာအုပ်ကိုဖတ်လို့ မရဖြစ်နေပါတယ် ကျေးဇူးပြု၍ကူညီပါ
Vansangva ကိုထောက်ခံသလို၊ ရေးသားပြုစုသော ဆရာများကိုအထူးလေးစားမိပါတယ်၊ အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးဖို့နဲ့ ဆက်လက်ကြိုးစားပါလို့လဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
အင်တာလိုင်းကအမြဲတမ်းမကောင်းလို့ ဒီwebsite ကနေ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလို့မရဖြစ်နေပါတယ်၊ Download file တွေ၊ powerpoint တွေနဲ့အသံFile တွေအားလုံးကို emailနဲ့ ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်၊ အင်တာနက်မသုံးနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဝေမျှချင်တယ်လေ၊ ကျွန်တော့်အတွက်အများကြီးအသုံးဝင်သလို ဆက်လက်ပြီးအသေးစိတ်လေ့လာချင်ပါတယ်။
send me about democracy book to my email
WILLIAM GATES 1
Thanks u so much for your Website
အရမ်းကောင်းတဲ့ အဘိုးတန်တဲ့ Website ပါ။ ဒီမိုကရေစီ အကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ သမိုင်းကြောင်း အဆက်ဆက်နဲ့၊ အခြား ရှားပါး စာအုပ်များ၊ ဆောင်းပါးများ ကို ဖတ်ရတဲ့အတွက် သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများကို နိုင်ငံသား အားလုံး သိသင့်တာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်လဲ တတ်စွမ်းသမျှ ပါဝင်ပြီး လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေပေးပါမယ်။